Mthuli Ncube, Zimbabwe’s finance minister in Harare, insists Oct. 25, 2018, that the bond notes will remain at par with the U.S. dollar, though on the market it continues to lose value and is now trading close to 4 to 1 U.S. dollar.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vaudza paramende kuti hupfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma.
Vachipa mashoko avo maererano nemamiriro akaita hupfumi kana kuti State of the Economy, VaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mamapfumbabwe pakupera kwegore.
Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa$9.6 billion muZvita gore rapfuura change chasvika pa$9.2b billion muna Kurume gore rino.
VaNcube vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa hupfumi, huwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera hwadera kubva pa$1.8 billion kusvika pa$1.1 billion.
Vatiwo huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa nehurumende kunze hwakwira uye gorighe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi.
Vati South Africa, United Arab Emirates neMozambique ndidzo dziri pamusoro pekutenga zvinhu zvemuZimbabwe.
Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza hupfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika.
Mumiriri weKwekwe Central, VaMasango Matambanadzo, vakurudzira VaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Asi kunyange hazvo VaNcube vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzehupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji.
Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa huremu hwemabhondi noti nemadhora eku America muna Kukadzi izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira.
Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindasitiri vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya.
Dzati izvi ndizvo zvinozoita kuti mitengo yezvinhu ikwirevo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora eRTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu.
VaNcube vati vari kuedza kugadzirisa nyaya iyi nekutsvaga mari kunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mumwedzi mishoma inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga.
Asi vanoongorora nyaya dzehupfumi vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro aVaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti hupfumi hwabudirira sei apo vachatura hurongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna Chikunguru.